IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington ikholelwa ukuba abantwana bafunda ngcono ngokwenza namava emfundo oyilo. Sibonelela abantwana ngeenkqubo kunye nemiboniso esebenzisanayo egxininisa izakhono zokucinga ezibalulekileyo, imiyalelo ye-STEAM, kunye neeprojekthi zezandla kwiisayizi zeqela elincinci. Sibonelela ngeendidi ngeendidi zeenkampu ezinemixholo ekhokelwa ngootitshala ababandakanyekayo, abaqeqeshiweyo, ukulungiselela nokuxhasa umdla womntwana ngamnye. Uyilo lwethu olukhethekileyo luquka izakhiwo ezithathu ezintle zembali, igadi yeemvakalelo, umboniso wamanzi adityanisiweyo, kunye nendawo engaphandle, enika abantwana indawo eninzi elungele abantwana ukuba bashukume, bafunde kwaye badlale.
Iinkampu zowama- 2021
Bhalisela i-e-newsletter yethu
Le nkampu yosuku ye-CMoW yenzelwe abantwana abathanda ulwandle ebomini bakho. Kule veki siza kufunda ngolwandle, intlabathi, amaqokobhe olwandle, ukuhamba ngenqanawa, iikorale, kunye nobutyebi bolwandle!
Izinto ekufuneka uzazi
​Iinketho zenkampu yemini yonke ziyafumaneka.
Iseshoni yakusasa KUNYE nabasekhempini imini yonke kuya kufuneka beze nesidlo sasemini esipakishiweyo.
Bonke abahlali beenkampu abaneminyaka emihlanu nangaphezulu bafuna imaski yobuso.
Bonke abakhweli beenkampu kuya kufuneka beze nebhotile yamanzi enokusetyenziswa kwakhona, ezaliswe ngokupheleleyo.
Nceda usazise ngayo nayiphi na i-allergies ngexesha lokubhalisa.
8 abantu beenkampu kwinkampu nganye.
Abantwana aba-5 okanye abambalwa, utitshala omnye.
Abantwana aba-6 nangaphezulu, utitshala okhokelayo + nabasebenzi bethutyana.
8:45AM - 9:00AM ixesha lokufika.
Iinkampu zinokubhalisela inkampu yasekuseni kunye nenkampu yasemva kwemini.
Ngokuhambelana nemithetho ye-COVID-19, siya kusebenzisa iindlela ezikhuselekileyo, zokungena ekuhlaleni kuyo yonke inkampu. Kuya kufuneka izigqubuthelo zobuso kumntu ngamnye ominyaka mihlanu nangaphezulu.